Ny tsy fitovian-kevitra eo amin'ny mpivady momba ny famorana - Raby Michael Avraham
Ny fifandirana eo amin'ny mpivady momba ny famorana
Responsa > Sokajy: Jeneraly > Ny fifandirana eo amin'ny mpivady momba ny famorana
hazo kesika Nanontany 2 taona lasa izay
Salama Raby ary mirary fety sambatra,
Raha toa ka misy ny fifandirana eo amin'ny ray aman-dreny roa momba ny famorana zaza iray. Ara-dalàna sy/na ara-moraly, tokony havela hanao izany ve ny antoko maniry ny famorana? Sa tokony hajanona ny toe-javatra ka avelao ny zaza hisafidy rehefa lehibe izy?
mikyab Staff Namaly 2 taona lasa izay
Miankina amin'ny fifanarahana teo amin'ny mpivady hatrany am-boalohany (rehefa nivady). Raha tsy misy ny fanekena mazava ary tsy azo tsoahina avy amin'ny fonja (ohatra ny fomba amam-panao manjaka eo amin'ny tontolo iainany) sns, dia toa ahy ny moraly dia tokony hamela ny zaza hifidy rehefa lehibe izy.
Sinoa sy sterile Namaly 2 taona lasa izay
Moral avy amin'ny fitsipika ara-pivavahana sa tsia?
Ary raha misy fifandonana eo amin'ny fivavahana sy ny fitondran-tena eto, hampiasa fiheverana faritany ve ianao ary aleonao ara-moraly? (Raha ny marina, maninona raha ampiasaina amin'ny ankapobeny ireo zaza ireo? Ohatra amin'ny toerana tsy ankatoavin'ny lalàna na ny fiaraha-monina ny teny iray)
mikyab Staff	Namaly 2 taona lasa izay
Tsy mpivavaka tokoa. Ary ny fanoheran'ny reny dia manala ny adidin'ny rainy?
Tsy azoko ilay fanontaniana momba ny faritany. Inona no fifandraisana?
Na na On Ny fisondrotana sy ny fianjeran'i Bennett sy ny heviny (Tsanganana 486)
Ary ny trano fahatelo On Ny fisondrotana sy ny fianjeran'i Bennett sy ny heviny (Tsanganana 486)